Dangal (2016) | MM Movie Store
Dangal (သို့မဟုတျ) အောငျမွငျမှုရဲ့ ခရီးကွမျး“နပနျးသမားတဈယောကျက ကှငျးထဲဝငျလာပွီး ပွိုငျပှဲဝငျရတဲ့ရညျရှယျခကျြက နိုငျငံအတှကျဆုတံဆိပျရယူပဖေို့အတှကျပဲ။ဒါပမေဲ့ နိုငျငံကတော့ နပနျးသမားတှကေို ဘာမှကူညီထောကျပံမှုမလုပျပေးဘူး။”
ဒီစကားကိုပွောတာက နပနျးအားကစားနညျးကို အသှေးအသားထဲကရူးသှပျပွီး နပနျးကစားနညျးကနေ နိုငျငံအတှကျ ရှတေံဆိပျဆုရပေးခငျြတဲ့ Mahavir Singh Phogat (Aamir Khan)၊ဒါပမေဲ့ သူ့ဆန်ဒမပွညျ့ဝခဲ့ဘူး။ဝါသနာနဲ့ ဝမျးစာ ထိပျတိုကျတှတေဲ့အခြိနျမှာ ဝါသနာကိုစှနျ့လှတျခဲ့ရပမေယျ့ သူ့မှာရညျမှနျးခကျြတဈခုရှိတယျ။
သူမှေးတဲ့သားက တဈနနေ့ပနျးသမားတဈယောကျဖွဈရမယျတဲ့။ကံကွမ်မာကတော့ သူ့ကိုကြီစားနတေုနျးပဲ။အနှဈနှဈကာလမြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ သားတဈယောကျလိုခငျြတဲ့သူ့အတှကျ ပထမဆုံးမှေးလာတဲ့ကလေးကတော့ မိနျးကလေး၊စိတျအပကျြကွီးပကျြခဲ့ရပမေယျ့ ဇှဲမလြှော့တဲ့သူကတော့ နောကျမှေးမယျ့ကလေးကယောကျြားလေးဖွဈရမယျတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ နညျးလမျးပေါငျးစုံ၊ဆေးပေါငျးစုံမှီဝဲရငျး ယောကျြားလေးရဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ဒီတဈခါလညျးမှေးလာတာကလညျး သမီးမိနျးကလေး၊စိတျဓာတျကစြဖွဈလာပမေယျ့ သားယောကျြားလေးမှေးလာနိုးနိုးနဲ့ ကလေးတှတေဈယောကျပွီးတဈယောကျမှေးလာခဲ့တာ ၄ယောကျမွောကျထိရောကျလာပမေယျ့
အကုနျလုံးကတော့သမီးမိနျးကလေးတှသော၊ဒီလိုနဲ့ Mahavir တဈယောကျ သူ့ရဲ့ရှတေံဆိပျရယူရေး ရညျမှနျးခကျြတော့ စှနျ့လှတျလိုကျရပွီပေါ့။ဒါပမေဲ့…….တဈရကျသူအိမိပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာ သူ့သမီးအကွီးနှဈယောကျဖွဈတဲ့
Geeta နဲ့ Babitaက ကြောငျးကအပွနျ လမျးမှာသူတို့နှဈယောကျကို လိုကျနှောကျယှကျတဲ့ ကောငျးလေးနှဈယောကျကို ထိုးကွိတျလှတျလိုကျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ Mahavir တဈယောကျ သူရဲ့နပနျးသှေးတှကေ သူ့သမီးတှဆေီမှာလညျး စီးဆငျးနတေယျဆိုတာသိပွီး သမီးတှကေိုနပနျးသငျပေးဖို့အတှကျ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတော့တယျ။
နောကျနေ့ မနကျ၅နာရီကစပွီး သံမဏိစညျးကမျးတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးတှစေပါတော့တယျ။အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ကြေးလကျဒသေမှာနထေိုငျပွီး ရှေးရိုးစှဲအယူတှကွေားမှာ မိနျးကလေးနှဈယောကျကို နပနျးသငျပေးတယျဆိုရတာကတော့ ကောငျးကငျကကွယျကိုဆှတျခူးရသလိုပါပဲ။
အတိုကျအခိုကျ၊ဝဖေနျရှုံခမြှုတှနေဲ့ မနာလိုမှုတှရှေိနပေမေယျ့ Mahavir တဈယောကျကတော့ ပတျဝနျးကငျြပွောတာကို ဂရုမစိုကျပဲ အလုပျနဲ့သကျသပွေဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။သမီးနှဈယောကျကတော့ ငယျရှယျသူပီပီ ပြျောပြျောပါးပါးနခေငျြပမေယျ့ ဖခငျရဲ့ သံမဏိစညျးကမျးကတော့ တဈပွားမှမလြှော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ လကေငျြ့လာခဲ့ရာမှ ပွိုငျပှဲတှမှောဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျတဲ့ အဆငျ့ကိုရောကျလာပါတော့တယျ။မိနျးကလေးနပနျးသမားမရှိတဲ့ ကြေးရှာမှာတော့ နပနျးပွိုငျပှဲရဲ့ ပွိုငျဘကျတှကေ ယောကျြားလေးတှကွေီးပါပဲ။
မိနျးကလေးမလို့ ပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့တျောတျောမြားမြားမှာ ငွငျးပယျခံရပမေယျ့ ပထမဆုံးယှဉျပွိုငျနိုငျတဲ့ပှဲမှာ ယောကျြားလေးပွိုငျဘကျကို အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ပွိုငျပှဲတိုငျးမှာ အနိုငျရပွီး ပွညျနယျအဆငျ့ရောကျကာ ပွညျနယျအဆငျ့မှာပါ ရှတေံဆိပျဆုရခဲ့ပွီး နိုငျငံလကျရှေးစငျအဖွဈရှေးခယျြခံရပါတော့တယျ။
နိုငျငံလကျရှေးစငျဖွဈလို့ ဝမျးသာမဆုံးဖွဈနတေဲ့ Mahavir အတှကျကတော့ လကေ့ငျြ့ရေးအထောကျအပံ့အပွညျ့အစုံရှိတဲ့ မွို့ကွီးမှာ စခနျးသှငျးလကေ့ငျြ့လိုတဲ့ သမီးကွီး Geeta ရဲ့ ဆန်ဒကိုလိုကျလြောပွီး ပို့ဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။
ဖခငျရဲ့ သံမဏိစညျးကမျးကနလှေတျမွောကျပွီး လှတျလှတျလပျလပျနရေတဲ့ Geeta အတှကျကတော့ အရာရာကပြျောရှငျဖှယျရာအတိပါ။နညျးပွဆရာအသဈနဲ့လကေ့ငျြ့ရပွီး သူ့အဖသေငျပေးတာတှထေကျပိုကောငျးတယျလို့လညျး မှတျယူလာခဲ့ပါတယျ။
တဈရကျခှငျ့ရလို့ အိမျအပွနျမှာ သူအဖရေဲ့နညျးစနဈတှကေ ခတျေနောကျကွနပွေီး အလုပျမဖွဈတော့ဘူးဟုပွောလာသောအခါ သားအဖနှဈယောကျမှာ စိတျဝမျးကှဲသှားပါတော့တယျ။ဒါပမေဲ့ Geeta တဈယောကျသူ့ဆရာရဲ့နညျးစနဈတှအေတိုငျး နိုငျငံတကာပှဲကို သှားရောကျယှဉျပွိုငျပမေဲ့ ပထမအဆငျ့ကနထှေကျခဲ့ရပါတော့တယျ။
သူ့ရဲ့ လကျရှေးစငျဘဝကိုလညျး ဆိုးရှားတဲ့ရလဒျက ခွိမျးခွောကျလာပါတော့တယျ။နောကျဆုံးအခှငျ့ရေးကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ကငျြးပတဲ့ 2010 Commonwealth Games မှာ ဆုတံဆိပျရယူနိုငျရေးပါ။ဒီလိုအခြိနိမှာ သတိရမိတာကတော့ အဖဖွေဈသူကိုပါပဲ။
အဖဖွေဈသူကလညျး သမီးဖွဈသူကို ခှငျ့လှတျပေးပွီး ဆုတံဆိပျရယူပေးဖို့အတှကျ အစှမျးကုနျကူညီပါတော့တယျ။သူတို့သားအဖနှဈယောကျလုံးမြှျောလငျ့တဲ့ ရှတေံဆိပျဆုက ရယူနိုငျမလား……… ဘယျလိုအခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့မလညျး…….အောငျမွငျအောငျလုပျဆောငျနိုငျမလားဆိုတာကတော့……….
Dangal (သို့မဟုတ်) အောင်မြင်မှုရဲ့ ခရီးကြမ်း“နပန်းသမားတစ်ယောက်က ကွင်းထဲဝင်လာပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က နိုင်ငံအတွက်ဆုတံဆိပ်ရယူပေဖို့အတွက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံကတော့ နပန်းသမားတွေကို ဘာမှကူညီထောက်ပံမှုမလုပ်ပေးဘူး။”
ဒီစကားကိုပြောတာက နပန်းအားကစားနည်းကို အသွေးအသားထဲကရူးသွပ်ပြီး နပန်းကစားနည်းကနေ နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုရပေးချင်တဲ့ Mahavir Singh Phogat (Aamir Khan)၊ဒါပေမဲ့ သူ့ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့ဘူး။ဝါသနာနဲ့ ဝမ်းစာ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဝါသနာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် သူ့မှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။
သူမွေးတဲ့သားက တစ်နေ့နပန်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ကံကြမ္မာကတော့ သူ့ကိုကျီစားနေတုန်းပဲ။အနှစ်နှစ်ကာလမျှော်လင့်ချက်နဲ့ သားတစ်ယောက်လိုချင်တဲ့သူ့အတွက် ပထမဆုံးမွေးလာတဲ့ကလေးကတော့ မိန်းကလေး၊စိတ်အပျက်ကြီးပျက်ခဲ့ရပေမယ့် ဇွဲမလျှော့တဲ့သူကတော့ နောက်မွေးမယ့်ကလေးကယောကျာ်းလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ၊ဆေးပေါင်းစုံမှီဝဲရင်း ယောကျာ်းလေးရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဒီတစ်ခါလည်းမွေးလာတာကလည်း သမီးမိန်းကလေး၊စိတ်ဓာတ်ကျစဖြစ်လာပေမယ့် သားယောကျာ်းလေးမွေးလာနိုးနိုးနဲ့ ကလေးတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မွေးလာခဲ့တာ ၄ယောက်မြောက်ထိရောက်လာပေမယ့်
အကုန်လုံးကတော့သမီးမိန်းကလေးတွေသာ၊ဒီလိုနဲ့ Mahavir တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ရွှေတံဆိပ်ရယူရေး ရည်မှန်းချက်တော့ စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့…….တစ်ရက်သူအိမိပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ သူ့သမီးအကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့
Geeta နဲ့ Babitaက ကျောင်းကအပြန် လမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကို လိုက်နှောက်ယှက်တဲ့ ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကို ထိုးကြိတ်လွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Mahavir တစ်ယောက် သူရဲ့နပန်းသွေးတွေက သူ့သမီးတွေဆီမှာလည်း စီးဆင်းနေတယ်ဆိုတာသိပြီး သမီးတွေကိုနပန်းသင်ပေးဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
နောက်နေ့ မနက်၅နာရီကစပြီး သံမဏိစည်းကမ်းတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတွေစပါတော့တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်ပြီး ရှေးရိုးစွဲအယူတွေကြားမှာ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို နပန်းသင်ပေးတယ်ဆိုရတာကတော့ ကောင်းကင်ကကြယ်ကိုဆွတ်ခူးရသလိုပါပဲ။
အတိုက်အခိုက်၊ဝေဖန်ရှုံချမှုတွေနဲ့ မနာလိုမှုတွေရှိနေပေမယ့် Mahavir တစ်ယောက်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။သမီးနှစ်ယောက်ကတော့ ငယ်ရွယ်သူပီပီ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေချင်ပေမယ့် ဖခင်ရဲ့ သံမဏိစည်းကမ်းကတော့ တစ်ပြားမှမလျှော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ လေကျင့်လာခဲ့ရာမှ ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်လာပါတော့တယ်။မိန်းကလေးနပန်းသမားမရှိတဲ့ ကျေးရွာမှာတော့ နပန်းပြိုင်ပွဲရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေက ယောကျာ်းလေးတွေကြီးပါပဲ။
မိန်းကလေးမလို့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်တော်တော်များများမှာ ငြင်းပယ်ခံရပေမယ့် ပထမဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပွဲမှာ ယောကျာ်းလေးပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ အနိုင်ရပြီး ပြည်နယ်အဆင့်ရောက်ကာ ပြည်နယ်အဆင့်မှာပါ ရွှေတံဆိပ်ဆုရခဲ့ပြီး နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပါတော့တယ်။
နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဖြစ်လို့ ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Mahavir အတွက်ကတော့ လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အပံ့အပြည့်အစုံရှိတဲ့ မြို့ကြီးမှာ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်လိုတဲ့ သမီးကြီး Geeta ရဲ့ ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီး ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖခင်ရဲ့ သံမဏိစည်းကမ်းကနေလွတ်မြောက်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတဲ့ Geeta အတွက်ကတော့ အရာရာကပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအတိပါ။နည်းပြဆရာအသစ်နဲ့လေ့ကျင့်ရပြီး သူ့အဖေသင်ပေးတာတွေထက်ပိုကောင်းတယ်လို့လည်း မှတ်ယူလာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ရက်ခွင့်ရလို့ အိမ်အပြန်မှာ သူအဖေ့ရဲ့နည်းစနစ်တွေက ခေတ်နောက်ကြနေပြီး အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဟုပြောလာသောအခါ သားအဖနှစ်ယောက်မှာ စိတ်ဝမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ Geeta တစ်ယောက်သူ့ဆရာရဲ့နည်းစနစ်တွေအတိုင်း နိုင်ငံတကာပွဲကို သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေမဲ့ ပထမအဆင့်ကနေထွက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
သူ့ရဲ့ လက်ရွေးစင်ဘဝကိုလည်း ဆိုးရွားတဲ့ရလဒ်က ခြိမ်းခြောက်လာပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးအခွင့်ရေးကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ 2010 Commonwealth Games မှာ ဆုတံဆိပ်ရယူနိုင်ရေးပါ။ဒီလိုအချိနိမှာ သတိရမိတာကတော့ အဖေဖြစ်သူကိုပါပဲ။
အဖေဖြစ်သူကလည်း သမီးဖြစ်သူကို ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး ဆုတံဆိပ်ရယူပေးဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ကူညီပါတော့တယ်။သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်လုံးမျှော်လင့်တဲ့ ရွှေတံဆိပ်ဆုက ရယူနိုင်မလား……… ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလည်း…….အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကတော့……….
Young IP Man ( 2020 )